Chivabvu 2018 - Network maRadio
musha / 2018 / Chivabvu
Mwedzi: Dai 2018
Posted on Dai 29, 2018
Anysecu 3G-W2 yekutanga vhidhiyo kuongorora
Ehe, inoshanda naZello! Ehe, inoshanda neChikwata Taura 3 (IRN), Hongu unogona kurodha maapplication kubva kuGoogle Play.
Zvakanaka, zvakanakisa kutarisa vhidhiyo uye kuzvionera wega redhiyo rinotaridzika sei!
Uye gadzirira kushamisika! Chishamiso chidiki! Iwe unoda imwe yako here? Tora pano!
Posted on Dai 28, 2018 Dai 28, 2018
Kukunda YEMAHARA Transceiver
Dzidza maitiro ekuhwina YEMAHARA nhare mbozha redhiyo! Hazvigone kuve nyore! Iyi ndiyo yekutsvaira kweiyo nyowani nyowani Anysecu 3G-W2 - Iyo nhare mbozha redhiyo ine huru kuratidza, yekushandisa nyore nhare! Wakamirira chii?
Uyu ndiwo mukana wako mukuru wekuhwina yemahara network transceiver - iyo Anysecu 3G-W2
Haufanire kutenga chero chinhu. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kunyoresa mune yedu tsamba uye iwe unowana yemahara kupinda kune yekutsvaira iyo ichaitika musi wa30 / 06/2018.
Tichaonana neanokunda ne-e-mail saka ita shuwa kuti iwe unowedzera kero yedu ye-e-mail kune vako vokukurukura kuitira kuti irege kuzoguma mune spam folda. Yedu e-mail kero info@network-radios.com
Asi iwe unogona kuwedzera mikana yako yekukunda, nekuwana mamwe emahara ekupinda kune sweepstake! Ona maitiro aungawana mamwe ekuwedzera:
Paunenge iwe wanyoresa, iwe unowana yako yakasarudzika kodhi uye iwe unongoda kugovana neshamwari dzako. Tarisa maitiro aungawedzera mikana yako:
Imwe neimwe inonyoresa kusaina + zana zvinyorwa
Goverana paFacebook +10 zvinyorwa
Goverana pa Twitter +10 zvinyorwa
Goverana paGoogle + + zvinyorwa gumi
Goverana paWhatsApp +10 zvinyorwa
Goverana paPinterest +10 zvinyorwa
Ingo nyora pazasi. Ukangozviita iwe, unogona kutarisa kuti mangani zvinyorwa zvawakaunganidza! Rombo rakanaka!
Posted on Dai 23, 2018 Dai 26, 2018
3 Misiyano pakati peRFinder K1 neM1
The RFinder K1 idiki pane iyo M1.
Dual SIM kadhi slot
The RFinder K1 ine mbiri mbiri SIM kadhi, saka unogona chaizvo kuva nevaviri vakasiyana mbozhanhare mbozhanhare mune imwecheteyo redhiyo uye kufona & kugamuchira mafoni, zvinyorwa uye kushandisa data data kubva kune vese vanopa.
Icho chingangove chinonyanya kufarirwa chishongedzo cheiyo K1. Ingo donhedza muchaja uye enda mberi nehupenyu hwako!
Chii chingaitwe nemawairesi aya?
Kushanda kweDMR kunonakidza, asi kubata nemakodhi plugs kunogona kutyisa musoro. RFinder inoita kuti zvive nyore.
Ko kana iwe uchigona kuve neredhiyo ine dhatabhesi yevese DMR vanodzokorora vanoenderera vachienderera uye iwe unongofanirwa kunongedza wobva wadzvanya kuti uchinje kune chaiyo frequency uye marongero? Uye izvi hazvingori zveDMR chete, asi zvakare vanodzokorora analogog uye echolink node.
Iyi ndiyo pfungwa yeRFinder. DMR yakaitwa nyore! Tora nzvimbo yako yeGPS, tsvaga vanodzokorora vari padyo, sarudza iyo kubva pane runyorwa, uye redhiyo yakanyatsogadziriswa!
Iyi 4-Watt Transceiver zvakare ine simba 4G / LTE Android smartphone uye inoshanda mushe muUS / CA, EU, UK, Australia uye nyika zhinji.
Enda kunzvimbo yepamutemo RFinder webhusaiti
Posted on Dai 22, 2018 Dai 22, 2018
Zvikonzero gumi zvekuve neRadio Network!
Tora chero network redhiyo ine 10% dhisikaundi. Ndichiri kunetsekana neiyi tekinoroji?
Nyorera tsamba yedu uye dzidza zvese zvaunoda kuti uzive nezveNhepfenyuro maRadio uye uwane yako voucher yekudzikisa.
Network-radios.com ndiyo yekutanga uye yepakutanga webhusaiti iyo iri 100% yakatsaurirwa kune ino inoshamisa bazi redio amateur.
Posted on Dai 17, 2018 Dai 17, 2018
RT4 - Network Radio Chiremera
The Radio-Tone RT4 parizvino ndiyo yega 4G / LTE Network Radio inoshanda muUS neEurope. Kusiyana neIrico T320, inopa US, Australia uye EU / UK 3G / 4G mabhendi. Izvi zvinogadzira iyo RT4 shamwari yekufamba yakanakisa. Kana iwe uri mutsva kuNetwork maredhiyo, saka iwe haugone kuve neimwe nzira iri nani yekutanga!
A smartphone yehams
Unogona kuishandisa senharembozha yakajairika, tsvaga mae-mail, utarise paInternet, ramba uchitaurirana neshamwari dzako dzehama uchishandisa IRN, Echolink, Zello nemamwe maapp.
Bhati refu risingaperi
Iyo 4600 mAh bhatiri inokutendera iwe kushandisa radio yako kweinopfuura zuva.
Ndiri kufarira! Ndiendese kunzvimbo yakanak kuti nditenge!
Posted on Dai 16, 2018 Dai 16, 2018
Saka chii chinonzi "Real Ham Radio" ipapo?
Pakutanga gore rino, ndakanyora chidimbu chinonzi "Haisi Real Ham Radio".
Zvakakonzera kunyongana uye kubvira zvakaparadzirwa pasirese, kutepfenyurwa uye kutaurwa munzvimbo zhinji nemumagazini zvakare.
Pfungwa yekutanga yaive yekuti, sezvo matekinoroji matsva achiuya muAmateur Radio Hobby, Hams anowanzoomerwa nekugadzirisa iwo.
Shanduko inoda mhinduro
Izvi zvinofanirwa, muchokwadi, kusave kushamisika. Uchakwanisa kufunga nezve dzakawanda zviitiko muhupenyu hwako uye hwekushanda kana shanduko yauya, kazhinji zvisingatarisirwi.
Dambudziko nderekuti shanduko inotyisa-uye izvi imhaka yekuti inoda kuti tiite neimwe nzira.
3 nzira dzatinoita pakuchinja
Kazhinji zvatinoita ndezvekurasa chero shanduko uye toedza kuramba tiri muchinzvimbo, patinonzwa kuti tinoziva "pasi" redu uye nekwatiri kunzwa takachengeteka. Dambudziko apa nderekuti shanduko dzese ipapo dzinogona kutipfuura - tinogona nyore kunyura mune izvo zvinokurumidza kuva "zvakapfuura".
Dzimwe nguva isu tiri kumanikidzwa kutora zvinhu zvebhodhi zvatingave tisingade chaizvo. (Kazhinji kazhinji hazvo, izvo zvinhu zvinosvika pakuve zvisina kunaka sezvataitarisira, zvakangosiyana.)
Uye chaizvo nguva nenguva, isu tinowana zvese zvakanaka uye mbundira chinja uye wozofara nazvo.
Nguva yekubvunza mubvunzo neimwe nzira ..
Saka, ndichiongorora chinyorwa changu chekutanga, ndakafunga kuti ingangove nguva yekupindura mubvunzo, chii chaizvo CHINONZI "Real Ham Radio"?
Pakarepo zvakadaro, ini ndinonzwa dambudziko pano - unogona kuwana mhinduro yakasiyana kumubvunzo uyu kubva kuna Ham mumwechete wepasi!
QRPer inokuudza Ham Radio ndeye kushandisa simba shoma kuti uwane kure
Anofarira Amateur TV aigona kutaura nezve makamera, bvunzo makadhi, anodzokorora uye kushandisa microwave frequency neidishi yeiyo antenna
Iyo DX-er inogona kukurega iwe nenyaya dzekunakidzwa kwemurwi-kumusoro uye nemanzwiro aunowana kana iwe uka "bhegi" nyika nyowani yakanangana neDXCC yako.
Top Band rag-chewer inogona kukuudza nezvehwo hushamwari hwaakaita pamusoro pemakore asingaverengeke uye zvisungo zvepedyo zvakagadzirwa (uye zhinji doro rinonwa!) Semhedzisiro
Anofarira CW angangokuudza kuti vanonzwa padhuze sei nemweya wekutanga weHams wekutanga
Anofarira LF aigona kukuudza nezvemaawa akapedzerwa kumonera makoji mahombe kuti uwane mutambo weantena, kungotora ERP shoma kunze
Nyanzvi yeMicrowave inogona kukuudza nezve kumonera nyanga dzenyanga pamisangano yekuyedza kuwana mazita eDX vachishandisa kumwaya kwechando senzira yekuparadzira
SOTA anofamba anokwanisa kukuudza iwe nezve mufaro weRadio kunze kukuru uye kuti hupenyu hunogara huri nani sei nemabhatiri
Yese iyi mienzaniso, uye ini ndingadai ndakaenderera mberi, imhinduro dzevamwe kumubvunzo "Chii chinonzi Ham Radio?"
Iwe unoda sei Ham Radio kuve?
Kune imwe nhanho, zvinoita sezviri pachena kuti "Real Ham Radio" ndizvo iwe kuda kuti zvive, chii iwe gadzirira iwe pachako.
Mashoma ekuzvivaraidza ane akasiyana siyana kwavari, nzira dzakawanda dzekutsvaga - ndinopokana kuti chero Amateur akambokwanisa kuvashanyira vese!
FT8, semuenzaniso, ndiyo yazvino digimode kuoneka panzvimbo uye yanga ichitora Hamu Nharaunda nedutu zvinoita - kunyangwe paine vakawanda, ini ndakabatanidzwa, regai tora kukanda kunze kwemakomputa-typing modes. Ini ndinoda kuona shamwari dzangu dzichichifarira zvakadaro, nekuti zvinochengeta hobho iri mhenyu.
Saka tinogona here kutsanangura "Real Ham Radio"?
Kutaura chokwadi idambudziko!
Ini ndaive neakareba mareferenzi nemaHams mashoma mushure mekutanga nyaya yangu. Isu taifanirwa kushanda nesimba kuti tiwane zvatinowirirana izvo zvaizogutsa mumwe nemumwe kuti tingatsanangure sei hobby yedu.
Ndakanga ndine imwe nharo yakanakisa yekufungisisa neAmerican Amateur panguva iyo isu tese takakwenenzverwa kufunga nezvekuti takatsanangura sei hobby iyi. Takakwanisa kubvumirana nekuda kwekushandurwa kwedu kweemail pane chimwe chinhu chiri padhuze neichi…
“Ham Radio mutambo wekutandarira apo rezinesi rinotenderwa nehurumende rinotaura zvataita fanira ita kuteedzera edu marezinesi mamiriro. Asi izvi zvinorondedzera chete kune kuburitswa kweRF - chero chinhu chipi zvacho chakabatanidzwa mune hobby chichajeka kwete anoda rezinesi. ”
Saka isu takanyatso kudonhedza dudziro kuiyo chete TX-ing pane yeAmateur Band zviri pamutemo munyika iyo inopa rezinesi uye hapana chimwe chinhu.
Asi izvi zvinonyatsotsanangura Ham Radio here?
Ndine mutengi ari Mudzidzisi paYunivhesiti yemuno. Iye ndiChiremba uye hunyanzvi hwake Microwave Technology. Ane rake rekutsvagisa uye zvakare varairidzi undergraduates. Seni akabata G7 callign. Kusiyana neni zvakadaro, iye ane haana kumbobvira ndanga ndiri pamhepo.
Ndiye mudzidzi here? Nedudziro yedu yekutanga, mhinduro ichave kwete, nekuda kwekuti iye anosarudza kwete kuendesa pane chaiwo zvikamu zveRF.
Nenzira, murume uyu ari, pachokwadi, wechokwadi weRF "nyanzvi" - haasi amateur (ane diki a) kana zvasvika redhiyo. Anoziva zvakawanda kupfuura vanhu vazhinji pasirese nezveradio, kunyanya maMicrowave.
Zvakanaka ngatichinjei dudziro.
Zvimwe tinogona kutaura "Radio Ham munhu ane rezinesi rekutepfenyura pane mamwe maAmateur Bands, angave achisarudza kuita kana kwete."
Ikoko - zviri nani. Tinogona ikozvino kuverenga mutengi wangu mune yedu nyowani tsananguro
Izvo zvakare zvinofukidza imwe shamwari yangu anova shasha pakuvaka uye kugadzira anotumira kubva pakutanga. Iye anowana kurova kwake kubva kune kwedu hobby nekuvaka - asi haamboendi kumhepo.
Iye anongoyedza maredhiyo ake akavakirwa pamba pane dummy loads uye kazhinji anowanzozvipa kune avo vari mune hobby vanofarira chikamu chekushanda. Chingave churlish kutaura kuti anga asiri "Real Radio Amateur", kunyangwe nehunyanzvi, haana kana vane kupasa bvunzo yake kuti ave Hamu wezvaanowana kubva pakuzvivaraidza.
Saka heino imwe nyaya - iwe unogona here kuva "Yechokwadi Radio Amateur", kana kuita zvechivanhu Hamu zviitiko, uye usingatombotora rezinesi bvunzo?
Izvi zvave kuoma zvakanyanya - pamwe tinogona kudzokera kumudzi wezwi re "Amateur" - chiLatin 'amare' - kuda.
Musiyano uripo pakati pevaAmateurs neProfessional ndewekuti zvekare zvaiitwa zverudo nevekupedzisira vanozviitira basa; mune mukana wese ivo vanobhadharirwa iyo.
Isu "tinoda" redhiyo kuitira kuti tsananguro igone kushanda, handizvo here? Pamwe kana pamwe kwete!
Mushure mezvose, maCB-ers anodawo radio. Saizvozvowo ma "Freebanders" uye vazhinji vanofarira zvekubhururuka.
Muchokwadi, zvimwe zvakawanda zvekuzvivaraidza zvinoyambukira kwatiri neimwe nzira - mhando vanofarira ndege vanoshandisa RF kuitira kuti hobho yavo ishande zvachose, semuenzaniso.
Saka tiri kuenda kupi?
Isu tinoratidzika kunge tiri kumusoro-kwe-sac isina nzira yekubuda nayo.
Hatigone kutsanangura Ham Radio nekutumira RF - zvakajeka isu tichiri Hams patiri kwete kuendesa RF pane chaiwo mabhendi
Hatigone kutsanangura Ham Radio na chete kupasa kweyezenisi bvunzo, saDoctor mutengi wangu uyo ​​asingatomboenda pamhepo kana kudzidzira kuzvivara mune chero fomu inogamuchirwa
Hatigone kutsanangura Ham Radio ne "rudo redhiyo" chero, sezvo ichisanganisira mapoka ari kumucheto kwechido chedu asi kwete chikamu chayo
Saka tiri pano uye zvino Network maRadio anosvika panzvimbo uye vanhu vari kukwenya misoro yavo kuti "tinovagamuchira" here kana kwete, sekunge isu tiri vamwe "vachengeti vechokwadi redhiyo chokwadi"!
Ini ndinofunga dambudziko nderekuti tekinoroji iri kuita kuti zvinyanye kuoma kutsanangura kuti chiiko chatinofarira - uye sezvo matekinoroji matsva uye matsva achiuya parukova, zvinogona kutowedzera zvakanyanya!
Zvichida isu tinofanirwa kufunga "kunze kwebhokisi" zvishoma zvishoma?
Haisi "Real Ham Radio"… kana ndizvo?
Network maRadio zvechokwadi haatenderi paHam Bhendi saka haikwanise kutsananguro yekutanga.
Nekudaro ivo vanokwanisa kukodzera mune tsananguro mbiri - unogona kuvashandisa sezvingaite Amateur, kana ukasarudza kudaro. Kana iwe ukasarudza kushandisa Hamu MaProtocol, zvakanaka, iro izita rako.
Dzinonyatsokodzera kududziro yechitatu mupfungwa yekuti tinokwanisa kudzishandisa nenzira dzatinoona dzakakodzera “kunakirwa” kwedu nekunakirwa.
Dzimwe tsananguro dzinodiwa!
Kutsvaga nekukurumidza tsananguro yechido chako kunouya neiyi - “chiitiko chinoitwa nguva zhinji munguva yemunhu yekuzorora ".
Well Network Radios anokodzera izvo zvakangonakawo - uye kubhutsu, ivo vanoshandisawo RF pazvikamu zvakasiyana muketani, kunyangwe pane maseru kana wi-fi mafiringi.
Asi kune zvimwe…
Nekudaro, rangarira kuti ivo zvakare vanogona kuyambuka muHamu mabhendi kuburikidza nekushambadzira odhiyo kana kuburikidza nekure kure oparesheni, semuenzaniso, HF transceivers. Izvi zvakajeka wakaramba inoda rezinesi reAmateur Service.
Zvinoshamisa ipapo, pane pfungwa umo Network maRadio panguva imwechete inogona uye isingade rezinesi!
Izvi hazvisi kuwana zvinopfuura zvishoma zvisinganzwisisike here? Ndo izvo izvo zvigadzirwa zvehunyanzvi zvinokuitira iwe!
Zvino pane chinetso!
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa ichi zvakadaro, chinja matambudziko isu - it matambudziko mamiriro acho.
Shanduko yakauya kakawanda mune yedu yekuzvivaraidza (iyi yaive pfungwa huru yechinyorwa changu chekutanga) uye zviri kutinetsa izvozvi muhunhu hweNetwork Radiyo.
Zvichida tinoda kuwedzera tsananguro dzedu; neiyi nzira, isu tinogona kupota zvakati wandei mune yedu hobby uye pamwe kutosvika kune vamwe nekukura.
Imwe nzira ndeyeku "batter pasi hura" uye kuyedza kudzivirira pedu pachedu makona eiyo hobby - pakupedzisira, ini ndinofunga kuti mugwagwa uyu ungangotitungamira mukuparara.
Chinja? Kana Mukana?
Ini ndinoda kutora kwaSeth Godin pane izvi… (kana usati wanzwa nezvake, tarisa kumusoro dzimwe hurukuro dzake dzeTED)
Anoti, "Shanduko haisi tyisidziro - mukana. Kupona kuri NOT chinangwa, transformative kubudirira ndiko ” (kusimbisa yangu)
Zvinoshamisira ipapo, iko iko chaiko shanduko iyo inozopedzisira yaendesa iyo hobby kumberi.
Kuedza kungo "pona" na chete zvatakaita kare zvichatoreva kuti tichadzikira pane kukura.
Network maRadio anogona kunge ari chikamu cheiyi kukura "mikana" - hazvina kukodzera kuvambundira kuti uone kana vari?
Chii chero mumwe wedu chaanofanira kurasikirwa nekuita saizvozvo? Kunze kwekunge pamwe kutya kwedu shanduko?
Posted on Dai 5, 2018 September 7, 2018
Ungachinja sei APN Zvirongwa muInrico T199 uye T192
Kuchinja marongero eAPN eiyo Inrico T199 kana Inrico T192 pane nzira mbiri.
Ngatitangei neMethod # 1 (iri nyore kwazvo)
Unganidza kune redhiyo uchishandisa diki USB tambo (unofanirwa kuona kuti tambo inokwanisa kubata data - mamwe haashande); Kune iyo T192, unoda microUSB adapta senge iyo inoratidzwa mumufananidzo pazasi.
Dzidza mashandiro Ekutonga Kwakakwana pane ino vhidhiyo:
Isa izvi App, uchishandisa nzira imwecheteyo seye muvhidhiyo.
Ita shuwa kuti redhiyo ine Flight Mode yabviswa - kuti iwe usaone iyo diki ndege icon.
Iwe uchaona runyorwa rwevatakuri. Ingosarudza yekutanga, wobva wadzvanya pane icon pamwe nedenderedzwa dema uye izvo APN Zvirongwa zvichaonekwa kwauri. Chinja zvakasununguka.
Semuenzaniso, yeStraight Talk (AT & T) iwe unofanirwa kuisa APN nyowani neanotevera marongero:
APN Zita Rakarurama Kutaura
Proxy siya usina chinhu
poti siya usina chinhu
Username siya usina chinhu
Pasiwedhi siya usina chinhu
Server siya usina chinhu
Mms poti 80
Usakanganwa kusevha iyo APN nyowani uye shandura kwairi. Pakupedzisira, Turn Flight Mode ON uye iyo OFF zvakare. Wagadzirira!
YeMethod # 2 unoda yakakosha USB tambo inosangana kune iyo Nzeve / Mic zvigadziko.
Kutanga, iwe unoda iyo CP210x USB kuna UART Bridge VCP vatyairi uye PC Zvirongwa software yekumhanya.
Ita shuwa kuti T199 USB tambo yakabatana, vhura redhiyo uye unomhanya PCSettingsEN.exe. Iwe unowana chidzitiro chakadai.
Ita shanduko dzese dzinodiwa uye wapedza!
Posted on Dai 4, 2018 Dai 4, 2018
10% Discount pane ese maRadio
Nyorera yedu Hamradio Newsletter uye uwane 10% dhisikaundi pane yako inotevera kutenga!
Simuka kuti ufambidzane neazvino amateur redhiyo nhau! Usarasikirwa nenhau dzinonakidza nezve Network Radios uye iyo nyowani Dhijitari Modes, seDMR, D-Star nevamwe. Takamirira iwe! 🙂
Posted on Dai 3, 2018
Chimwe chezvinhu chakandikwevera (uye pamwe newewo) kuAmateur Radio kwaive kugona kuita kureba (kana DX) kutaurirana.
Kudzoka muma1960 nema1970 hazvo, kune ruzhinji rwevanhu, kutaura nemumwe munhu kune imwe nyika raive bhizimusi rakaomarara uye rinodhura.
Ndinoyeuka ndichitenderwa nevabereki vangu kujoina nhepfenyuro yeRadio Nederland yemwedzi wega wega "Inofadza Chiteshi" foni-mune mbiri dzakasarudzika kutanga kwema1970.
MuUK, izvi zvaisanganisira kufonera International Operator Service pamberi uye booking iyo kufona. Iwe hauna kubvumidzwa, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, kuti uzvibayire iwe wega mumazuva iwayo!
Iwe wakapa iyo nhamba iwe yawaida kufonera kune anoshanda uye wakaedza kutsanangura kuti zvaive zvakanaka kana ivo vakagona kuifona pane imwe nguva sezvo yaive nhare-mukati, asi muchokwadi, iwe wanga uri pamakumbo evamwari - iwe waifanira kumirira yako nguva mumutsara!
Pakupedzisira kunyangwe iyo Operator yaizokufonera yobva yadhaya iyo yepasi rose nhamba yako. Pane imwe mari yakawandisa, iwe wakazopedzisira waiswa kuburikidza (kana kwete, mune iyo foni-muchirongwa sezvo iyo nhamba yaiwanzo kubatanidzwa panguva iyoyo - sheesh!)
Ham Radio - Chinhu Chinokosha
Saka kuve weRadio Amateur mumazuva iwayo yaisave chete nzira yekuwana yazvino yepamusoro-to-date technical hobby, yaive zvakare nzira yekushandisa yako redhiyo hunyanzvi kutaura nevanhu vari kure-kure mamiriro, dzidza nezve nyika jogirafi, uye gamuchira iwo mashiripiti QSL makadhi ayo airatidza kushamwari dzako kuti iwe wawana chimwe chinhu chakakosha uye kuti iwe hauna kunyatso kuzviita zvese!
iwe vakanga mumwe munhu saHamu!
UK-ku-UK yainakidza futi
Kunyangwe kutaura nevamwe vanoshanda muUK chaive chinhu.
Asati mazuva aMigwagwa yeMigwagwa (Freeways yehama dzedu dzeUS, Autoroutes muEurope) rwendo rwenyika yese rwaigona kutora maawa akati wandei. Ini ndinonyatso rangarira rwendo rwakaitwa nemhuri yangu kuenda kugungwa kuDevon muna1973 iyo yakatora chikamu chakanakisa chemaawa masere mumigwagwa yekare ye "A"…
SaHamu mumazuva iwayo, kunyangwe kutaura nechiteshi muDevon, hazvo, zvakanzwa sekutaura kune mumwe munhu kune rimwe divi repasi!
Saka kuve Radio Amateur kare ikako kwaive kuita kunge uri "Mambo wemaAirwaves" - nyika yaive chaiyo oyster yako!
Pakasvika CB Radio ne446 MHz, zvaive nyore kupatsanura Ham Radio kubva kune iwo masevhisi - ivo vakagadzirwa seyepfupi-renhepfenyuro redhiyo chete uye, kunze kwekunge mamiriro aive akasarudzika (ayo aimbove ari pa27MHz!) Ivo havawanzo gara kwenguva refu -kupararira kupararira.
Iwo masevhisi aisatyisidzira amateur redhiyo semhedzisiro - uye zvinosuwisa, pamwe nekuda kweizvi, vakawandisa Amateurs panguva iyoyo vaitarisira pasi maCB-ers - yanga isiri "redhiyo chaiyo" uye vashandisi vayo vaive "vakaderera" uye "vasinganzwisise nhepfenyuro chaiyo". (Wanzwa izvo pamberi pese pese, nenzira?)
Iye zvino fambira mberi kusvika nhasi - uye matafura akanyanya kuchinja!
IInternet zvinoreva kuti zvakanyanya kunaka vose ine mukana usina kumakwa wekutaurirana kwepasirese, nenzira dzakasiyana siyana.
Zvinyorwa, zvinyorwa, mapikicha, odhiyo, vhidhiyo - iwe unozvitumidza, zvinogona kutumirwa zvakanyanya pasi rese uye nemutengo mudiki.
Muchokwadi, maMadzimambo matsva eAirwaves muna 2018 vari…. tese!
Radio Amateurs ikozvino yabatanidzwa ne Vamwe vese!
Zvinoshamisika here ipapo kuti Ham Radio inowanzoonekwa mazuva ano (nevanhu kunze iyo hobby zvirinani) seyakare-echinyakare, fuddy-madhaka uye nekuchengetedza kwevakuru varume vanosarudza kurarama munguva yakapfuura?
Ndosaka isu tine dambudziko rekuzivikanwa - hazvishamise kuti zvakaoma kukwezva ropa idzva!
Kana zvakanakisa zvatinogona kupa ndezvekuti "iwe unozokwanisa kubatsira nekukurumidzira kutaurirana kana njodzi yechisikigo kana hondo yaparadza nzvimbo yako" hazviite kunge zvinonyanya kukwezva!
Chinyorwa cheMunyori: Ndokumbira unzwisise kuti uku hakusi kushora avo vanopa sevhisi nenzira; Ndiri kungoedza kuratidza zvikonzero nei hobho yedu isinganakidze sezvaimboita - ndine ruremekedzo rwese kune avo vanoshandira nharaunda nenzira isina nhando nenzira yakadaro, iwo magamba mune ese pfungwa inofungidzirwa yeshoko.
Kuparadza makomputa - ivo vakanganisa iyo hobby
Kufanana nazvo kana kwete (uye neniwo ndine rudo-ruvengo hukama navo) makomputa akachinja zvese nzanga uye nekudaro yedu huru yekuvaraidza futi. Uye ivo vari kuzoenderera mberi vachidaro.
Network maRadio (ayo atinogona kufunga se "muhomwe SDR makomputa ane PTT bhatani" sezvo zviri izvo zvaari) inongova imwe chete imwe shanduko chikamu cherwendo.
Ivo vanotibvumidza isu kuwana iyo hupfumi uye ruvara rweInternet kuparadzira, tichiripo mupakeji yatatonzwisisa uye yatinogona kushandisa.
Iye zvino tinogona kushanda mamwe maHams chero kwavanenge vaine chinongedzo kunetiweki, kana zvirizvo zvatinosarudza kuita.
Zvakada kufanana nekushandisa iyo Internet seyakawanda yakasanganiswa seti yevanodzokorora, chete ivo havasi vega kuna Hams zvekare - isu tinogovana iro sevhisi pamwe nevamwe vanhu vese.
Uye pamwe ichi chikonzero chimwe chete chekuti kuve nekupokana nesangano iri.
Paive, uye nanhasi zviripo kusvika padanho guru, iyo kusarudzika nezve kubata reRadio Radio rezinesi.
Ndinoyeuka ndichishanda zvakaoma kwazvo kune yangu. Ini ndaive, uye ndichiripo nanhasi, ndinodada kuti ndakazviwana (neCredit uye Distinction mumapepa maviri andakagara, nenzira, pamwe neyakaipisisa isina kukwana 12wpm Morse Test;))
Asi muna 2018 nekupfuura, rezinesi rekufambisa pamabhendi anowedzera ane ruzha ayo anoda maantena makuru, ayozve anokonzeresa kukakavadzana nevavakidzani uye kupokana nezvibvumirano zvinorambidza, zvinoita kunge zvichikosha kune vakawanda Hams.
Nekuda kweizvozvo, zvinoita sekunge vazhinji vakavhota netsoka uye vakasiya hobho zvachose.
Chinhu chekukura chiri kukura, asi kwete sekuzviziva kwedu
Network radio haina kutambura nematambudziko aya zvakadaro. Uye kunyangwe isu tisingatarise se "yakachena" saHam Radio zvaive munguva yakapfuura, iri kubatsira kuchengetedza iyo hobby irarame.
Chokwadi, kana izvo zvandiri kuona zviri chaizvo, zviri kutokura!
Mazuva ese, ndiri kunzwa Hams achiuya paNetwork achitaura zvinhu zvakaita se…
"Ndanga ndiri muredhiyo muvhiki yadarika yandinayo mumakore gumi apfuura."
"Handina kumbofunga kuti ndaizoshandisa Ham Radio zvakare kusvikira ndaona chiteshi ichi."
"Izvi zvanyatsomutsiridza mutambo wangu wekuvaraidza."
"Handisati ndawana rezinesi rangu reHamu, asi ndiri kudzidza zvakawanda kubva mukutaura nemi vakomana uye ndiri kuenda kunonyoresa kukosi inotevera."
Chidzidzo kubva kuRoma Yekare?
Ndezvipi zvakataurwa pamusoro paNero - kuti iye "akavhiringidza Roma ichipisa"?
Zvisinei nekurongeka kwenhoroondo kwechirevo ichocho, ndinoshamisika kana paine pfungwa yechinhu chakafanana chiri kuitika mukati mekutandarira kwedu.
Zvikwata zvedu zvechivanhu zviri kudzikira zvishoma nezvishoma kubva kwatiri pasi pemurwi weruzha here?
Vanhu vari kusiya Ham Radio nekuti "hazvisi izvo zvayaive"?
Pfungwa yekumisa nyowani nyowani inonzwika isinganakidze pane kutaura nemhuri pasocial media kana kutarisa kwako nhau yekudya?
Kana mhinduro kune chero yeaya iri hongu, saka rega ndibvunze, maNethiwekhi maRadio angangoita imwe nzira yatinogona kuita piggy-back paInternet kuparadzira uye kuunza kuzvivaraidza kwedu mberi muzana ramakumi maviri nemana?
Kana zvirizvo, kana kunyangwe zvisiri, isu zvirinani kuti tikurumidze nechimwe chinhu!
Makumi maviri emakore ezana rino ramakore akapotsa apfuura uye zvine nharo inopfuura 50% yeva Amateurs zvisingaite kuti uve papasi rino panopera makumi maviri emakore anotevera, nguva yanga yave kupera kune yekuvaraidza kweimwe nguva yatove ...
Hapana ari kutaura kuti Network maRadio ndiyo mhinduro kune ese nyaya iyo hobby inotarisana nayo. Zviripachena havasi.
Asi ivo vatove kutamba chikamu chiri kuramba chichiwedzera mune yekuvaraidza uye yakanaka, kubva pane zvandiri kusangana nazvo.
Tinorasikirwa chaizvo hapana nekugamuchira izvo zvavanogona kutiitira - uye vangangove iwo mukana watisingakwanise kupasa.
Kubata iwe "pamambure"?
Inrico T320 4G / Wifi (Android kukiyiwa)